BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/26/20080အကြံပြုခြင်း
ရန်ကုန် အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ ၀န်ထမ်းတွေ မုန်တိုင်းဒေသ သွားခွင့်ရ
ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများအရေးပေါ် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့
(UNICEF) ရဲ့ နိုင်ငံတကာဝန်ထမ်း ၆ ဦးကို
မုန်တိုင်းဒဏ် အပြင်းအထန်ခံခဲ့ရတဲ့ ဒေသတွေ
မှာ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ဖို့ မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေက ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ
ဘန်ကီ-မွန်း (Ban Ki-moon) မြန်မာပြည်က ပြန်
လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှု
အသစ်တခုလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘန်ကောက်
မြို့မှာ စောင့်ဆိုင်းနေဆဲရှိတဲ့ အမေရိကန် အကူ အညီပေးရေးအဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအေဂျင်စီ (USAID) ရဲ့ သဘာဝဘေး
အန္တရာယ် တုံ့ပြန်ထောက်ပံ့ကူညီရေး (DART) အဖွဲ့ကတော့ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရဖို့
ကြိုးစားနေကြဆဲ ရှိပါသေးတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဘန်ကောက်ရောက် ဗွီအိုအေ
၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF) ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာဂစ် မုန်တိုင်းမသင့်ခင်ကတည်းက ကလေးသူငယ် အာဟာရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းတွေ၊ ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ကာလရှည်
ကြာ လုပ်နေခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတခုပါ။ ဒီအဖွဲ့ကိုတောင်မှ မုန်တိုင်းဒဏ် အပြင်းထန်ဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ ဒေသတွေဆီ သွားလာခွင့်နဲ့ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် အခြေအနေတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တိုင်းတာစစ်ဆေးခွင့်တွေကို မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက အရင်
ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ UNICEF ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၀န်ထမ်းတွေကိုသာ အဲဒီဒေသတွေဆီ
သွားခွင့်ပြုထား၊ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားခဲ့တာပါ။ အခု UNICEF ရဲ့
နိုင်ငံတကာက ၀န်ထမ်းတွေကို သွားခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတာဟာ တကယ့်ကို တိုးတက်
မှု အသစ်တခုပါပဲလို့ ဘန်ကောက်အခြေစိုက် UNICEF ရုံးက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ
အမျိုးသမီး မစ္စ ရှန်သာ ဘလိုးမန်း (Ms. Shantha Bloemen) က ဗွီအိုအေကိုပြောပါ
“မိမိတို့ရဲ့ နိုင်ငံတကာဝန်ထမ်း ၆ ယောက်ဟာ မုန်တိုင်းဒဏ် အပြင်းအထန်သင့်ခဲ့တဲ့
ဒေသတွေမှာ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းတွေကို ပူးပေါင်းလုပ်
ဆောင်ဖို့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်ကုန်အတွင်း သဘောတူညီမှု ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ
တကယ့်ကို တိုးတက်မှုအသစ်တခုပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းတပတ်ခွဲအချိန်တုန်းက သူတို့ ထွက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ နိုင်ငံတကာက ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ အဓိကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တိုင်းတာစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှာ သူတို့ ပူးပေါင်းနိုင်ကြတော့မှာပါ။” လို့ မစ္စ ရှန်သာ
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ဒေသတွေနဲ့ လူထုတွေရဲ့ အခြေအနေမှန်တွေကို တိတိကျကျ အမှန်
အတိုင်း တိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်ရေးဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ အဓိကအရေးပါတဲ့ကိစ္စတခု
ဖြစ်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက အကူအညီပေးမယ့် အလှူရှင်တွေကလည်း ယုံကြည်
အားကိုးရတဲ့ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နိုင်အောင် နိုင်ငံတကာက ကူညီကယ်ဆယ်
ရေးဆိုင်ရာ လုပ်သားတွေ၊ ကျွမ်းကျင်သူတွေကို ၀င်ခွင့်ပြုဖို့ တောင်းဆိုနေခဲ့ကြတာပါ။
ASEAN အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ဆူရင် ပစ်ဆူ
၀န် (Dr. Surin Pitsuwan) ကလည်းပဲ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေ
ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်တဲ့ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုတွေကိုသာ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ ယုံကြည် ကိုးစားမှုရှိနိုင်မယ်လို့ ပြောထားဖူးပါတယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှု အချက်အလက်တွေ ရရှိဖို့ရာဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ စိန်ခေါ်မှုတခုအဖြစ် ရှိနေပါသေးတယ်လို့ မစ္စ ရှန်သာ ဘလိုးမန်းက ဆိုပါတယ်။
“ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှု အချက်အလက်တွေရဖို့၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်
ရာ အချက်အလက်တွေ ရဖို့ရာဟာ လက်ရှိ စိန်ခေါ်မှုတွေထဲက တခုပါ။ ချက်ချင်း
လိုအပ်ချက်တွေက ဘာတွေ၊ ကျောင်းဘယ်နှစ်ကျောင်း၊ ကျန်းမာရေးဌာနဘယ်နှစ်ခု
လိုတယ် ဆိုတာတို့လို ရေရှည်လိုအပ်ချက်တွေက ဘာတွေ၊ တကယ့်လက်တွေ့မှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာ ပမာဏနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်
အလက်တွေရဖို့ လိုပါတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဝင်ရောက်ပြီး ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း
တွေ လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ၀င်ခွင့်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ အမေရိကန် အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့
တခုဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအေဂျင်စီ (USAID) ရဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် တုံ့ပြန်ထောက်ပံ့ကူညီရေး (DART) အဖွဲ့ဟာ ပြည်ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာတွေ ပြင်ဆင်
နေပြီဖြစ်ပြီး ရလိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
DART အဖွဲ့ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမျိုးသမီး မစ္စ ရီဘက်ကာ (Ms. Rebecca) က …
“ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်လွှာတွေကို အခုပြင်ဆင်နေပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်
စာတမ်းတွေ ပို့ပါတော့မယ်။ ဘယ်တော့ဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ တိတိကျကျ မသိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် မိမိတို့ကို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပေးလိမ့်မယ်လို့ တကယ့်ကို မျှော်လင့်ပါတယ်။” ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာပဲ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့က မြန်မာသံရုံးမှာ မီးလောင်မှုတခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဆောက်အဦး တစိတ်တပိုင်း ပျက်စီးသွားတာကြောင့် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ထုတ်ပေးတဲ့
ဌာနကို လောလောဆယ်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေက ထွက်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့
ပတ်သက်ပြီး တိတိကျကျသိရအောင် ဘန်ကောက် မြန်မာသံရုံးကို အကြိမ်ကြိမ်
ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့် တယ်လီဖုန်းဖြေဆိုမယ့်သူ မရှိတဲ့အတွက် သံရုံးရဲ့အတည်ပြုချက်
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီ-မွန်းနဲ့ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ချိန်က ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေ
ကို ဘယ်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ် ၀င်ခွင့်ပြုဖို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက သဘောတူခဲ့
ကြောင်း မစ္စတာ ဘန်ကီ-မွန်းက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ နိုပါဒွန် ပတ်ထမား (Nopidon Pattama)
ကတော့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဗီဇာတွေကို ခြွင်းချက်မဲ့ ထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲ ကိစ္စရပ် တခုချင်းအပေါ်မှာ အခြေခံစဉ်းစားပြီး ထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတာကြောင့် မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေဟာ ကုလသမဂ္ဂကိုတမျိုး၊ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံအပါအ၀င် အာဆီယံ နိုင်ငံတွေကိုတမျိုး ပြောနေသလားလို့ ဝေဖန်သုံးသပ်တာတွေကလည်း ထွက်ပေါ်နေ
ဘန်ကောက်ရှိ မြန်မာသံရုံး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့က မြန်မာသံရုံးမှာ
မယ့် လူအသေအပျောက်နဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ
ရတာတော့ မရှိဘူးလို့ မျက်မြင်တွေက
ပြောပါတယ်။ မီးဟာ နေထွက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် တနာရီ လောက်အတွင်းမှာပဲ ငြိမ်းသတ်နိုင်လိုက်တယ်လို့ ထိုင်းမီးသတ်အရာရှိတဦးကို ကိုးကား
ပြီး အေပီသတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မီးဟာ မတော်တဆ လောင်ကျွမ်းတာ
ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်မီးကြိုး ချို့ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြောင်း တခြားသတင်းတွေမှာ ဖော်ပြကြပါတယ်။
မီးလောင်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အဲဒီနေရာကို ရောက်သွားခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား
ကိုအရှိုင်းကတော့ ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“စာအုပ်စာတမ်းနဲ့ ပစ္စည်းတွေထားတဲ့ အဆောင်တခုပဲ လောင်သွားတယ်။ တခြား အဆောင်တွေတော့ လုံးဝ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာကလည်း အဲဒီအဆောင်တခုတည်းကိုပဲ မြင်ခဲ့တယ်။ ပျက်စီးတာကတော့ အပေါ်က ခေါင်မိုးတွေ အကုန်လန်ထွက်သွားတယ်။ သွပ်ပြားတွေအကုန်လုံးသွားပြီး ခေါင်မိုးမှာ ဘာမှမရှိ
ဘန်ကောက်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုအရှိုင်းပါ။
သူပြောသွားတဲ့ထဲမှာပါသလို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်
စာအုပ်တွေထားတဲ့အထပ်မှာ လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်လို့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေ
မီးလောင်တဲ့အထဲ ပါသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ ထွက်လာပေမယ့် သီးခြားအတည်
ပြုချက် မရသလို သံရုံးကို ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဖုန်းဖြေကြားမယ့်သူ မရှိခဲ့ပါဘူး။
အခုချိန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်လူထုကို ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအတွက်
နိုင်ငံတကာက အကူအညီပေးရေးလုပ်သားတွေ ၀င်ခွင့်ပြုမယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရ
ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ
ဘန်ကီ-မွန်း (Ban Ki-moon) ကို သဘောတူညီချက် ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ အချိန်ကာလ
အခု မီးလောင်ကျွမ်းသွားတဲ့ သံရုံးအဆောက်အဦးထဲမှာပဲ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာတွေ လျှောက်ထားတဲ့နေရာလည်း ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ အေပီသတင်းမှာ ရေးသားထား
လောလောဆယ်မှာ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လျှောက်ထားတဲ့ဌာနကို ပိတ်ထားလိုက်တာ
ကြောင့် ပြည်ဝင်ခွင့်ရဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ နိုင်ငံတကာက အကူအညီပေးလုပ်သား
တွေအနေနဲ့ နောက်ထပ် စောင့်ဆိုင်းကြရဦးမယ့် အလားအလာ ရှိနေပါတယ်။
ISP နှင်.Internet စည်းကမ်း
UN optimistic Myanmar aid can get through, while cyclone victims remain begging by roadside
U.N. officials expressed hope Monday that they would soon be able to help more than 1 million Myanmar cyclone survivors who have yet to receive any aid, while victims of the storm huddled on the country's roadsides, hungry for any sort of handout.
The U.N. has estimated of the 2.4 million people affected by the storm, about 42 percent had received some kind of emergency assistance. But of the2million people living in the 15 worst-affected townships, only 23 percent had been reached.
In Pyapon,acoastal township southwest of Yangon, hundreds of makeshift huts have been built along the road. Women and children squat outside, the children begging for food, their arms outstretched as vehicles pass.
The area can be reached fairly easily, but the survivors said they had not received any government aid and were surviving on donations from private citizens and Buddhist monks.
"I have no hope that the help will come," said farmer Aye Shwe, 52, who lives with his family of eight in one of the bamboo and thatch huts, which he built from materials he could scrounge.
For sustenance the family has relied on private donors who drive up in trucks with rice and potatoes.
"We live from hand to mouth," Aye Shwe said. "We have no buffaloes, no paddy fields."
The authorities have been driving up and down the road since last week, telling people throughaloudspeaker to leave the area and go home.
But the land on which his house stands, inanearby paddy field, is still waist deep in water, he said.
Assistance can start flowing to those that need it in the next few days if Myanmar's junta quickly allows foreign experts into the affected areas, Richard Horsey,aspokesman for the U.N. humanitarian operation in Bangkok, Thailand told The Associated Press.
The ruling generals have virtually barred foreign aid workers and international agencies from the hard-hit Irrawaddy Delta since the May 2-3 Cyclone Nargis.
But after meeting junta chief Senior Gen. Than Shwe on Friday, U.N. Secretary-General Ban Ki-moon said the reclusive leader agreed that international aid workers will be able "to freely reach the needy people."
After the agreement, said Horsey, "it is critical that gets translated to practical access on the ground. The signs so far are good."
He said international aid agencies are now starting to move out into those areas "but of course it's very early and we must make sure that this continues."
By quickly scaling up their operations, he said, "in the coming days we can start to reach all of those that need to be reached."
The International Red Cross said Monday at least 1.5 million people, many of them hungry and ailing, remained homeless in the rain-swept delta. Official estimates put the death toll at about 78,000, with another 56,000 missing.
"We have seen that the Myanmar government is moving fast to implement their commitment. My sincere hope is that they will honor their commitment _ that we have to see," U.N. chief Ban told reporters before leaving Bangkok, Thailand, for New York on Sunday night.
Ban said he would remain "fully, continuously and personally engaged" in the crisis and return to Myanmar "before long."
After Ban's agreement with Than Shwe, aid organizations immediately began planning to send hitherto banned teams into the Irrawaddy Delta and resubmit visa applications for staffers abroad that had earlier been rejected.
Ban's mission to open Myanmar's doors to more assistance climaxed Sunday when donor nations offered more than US$100 million (€63 million) to help the country recover from the cyclone.
But donor nations warned they will not fully open their wallets until they are given access to the hardest-hit areas.
The granting of visas to foreign aid workers had been accelerating in the past week. But the process may have hitasnag Monday when the Myanmar Embassy in Bangkok _ the main gateway to Myanmar _ temporarily closed down its visa section afterafire ripped through part of its main building. The section was reopenedafew hours later.
The junta is also hesitant to have its people see aid arriving directly from countries like the United States, which it has long treated asahostile power seeking to invade or colonize.
"It remainsarace against the clock and the logistical challenges grow with the rain. What reaches the cyclone-devastated areas can't get there fast enough, and what does get through is not enough," the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies said.
At Sunday's meeting, pledges came from the European Community, China, Australia, South Korea, the Philippines and others.
Myanmar has estimated the economic damage at about US$11 billion (€7 billion) and the United Nations has launched an emergency appeal for US$201 million (€127.7 million).
Those and other makeshift dwellings that have popped up on the roadsides are barely sufficient to shield people from the searing morning sun or the monsoon rains that sweep in to drench the area most afternoons.Many of those who moved to the roadsides are the poorest of Burmese farmers, those who rent rice paddies from landlords. Before the storm, they traveled with their buffaloes, ducks and pigs from field to field, living in huts beside their paddies.
UN hopeful on Burma relief access
The United Nations says there are encouraging signs of better co-operation from Burma on cyclone relief. Kathleen Cravero, who heads the UN's Development Programme (UNDP), said foreign aid workers were finding it easier to gain access. The UN Secretary-General, Ban Ki-moon, earlier spoke ofamore flexible attitude.
Burma says new constitution overwhelmingly approved
YANGON, May 26 (Xinhua) -- Myanmar's draft constitution has been approved with an overwhelming votes cast in favor by 24,764,124 or 92.48 percent of turn-out voters, in the nationwide referendum held for two rounds during this month, the state TV reported Monday quoting an announcement of the Commission for Holding Nationwide Referendum.The number of the turn-out was 26,776,675 or 98.1 percent out of eligible voters of 27,288,825 in the whole country.
The number of voters who voted against the constitution were 1,631,712, while canceled votes went to 380,839.
There isatotal population of 57,504,368 in the whole of Myanmar and the ballot castings were held in 325 townships.
The first round of the referendum was held on May 10 across the country except the 40 townships in Yangon division and seven townships in Ayeyawaddy division under cyclone-hit areas status.
The second round took place on May 24 in the 47 remaining townships in cyclone-hit divisions.
The referendum on the new constitution draft constitutes the fourth step of the military government's seven-step roadmap announced in 2003. The remaining steps are to holdamulti-party democracy general election in 2010 to produce parliament representatives and formanew civilian government to which power is to be handed over by the military.
The Burmese state media announced that the constitution, which was drafted by Burmese government, was approved by 92.5 percent of voters inareferendum carried out in two phases - first on May 10 and then May 24 in the cyclone-hit areas of the Irrawaddy delta and Rangoon. The ruling generals said that by the end ofareferendum process on Saturday, more than nine voters in ten had backedacontroversial new constitution.
They say the constitution will pave the way forageneral election in 2010.
However,aspokesperson of the opposition NLD party, U Thein Nyunt, rejected the announcement asa'mere joke'.
A fire broke out at the Burmese embassy building in Bangkok early on Monday but there have been no reports of death or injury.
ရန်ကုန် အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ ၀န်ထမ်းတွေ မုန်တိုင်း...
UN optimistic Myanmar aid can get through, while c...
Weeks After Cyclone in Myanmar, Even Farmers Wait ...